UKULUNGELELANA KWE-GEMINI NEZINYE IIMPAWU ZODIAC
Fumanisa ukuba yintoni Ukuhambelana kweGemini neminye imiqondiso, saziwa njengamaqabane omphefumlo, sithambile kwaye sinemvakalelo elungileyo. Yiza ufunde kweli nqaku iimpawu ezahlukeneyo kunye neempawu zesimo sengqondo ezinazo ezinye iimpawu ngeGemini.
1 Ukuhambelana kweGemini
1.1 IGemini eneGemini, ubudlelwane obunobuchule kunye nolwalamano oluhambelanayo
1.2 IGemini enomhlaza, ubudlelwane nabantu abahlukeneyo
1.3 IGemini kunye noLeo ubudlelwane bokutsala bobabini
1.4 IGemini neVirgo, ubudlelwane obugcwele ukugxekwa
1.5 IGemini eneScorpio, ubudlelwane bomona kunye nengxabano
1.6 IGemini eneSagittarius, ubudlelwane obuvulekileyo kunye nokuzenzekelayo
1.7 IGemini neCapricorn, ubudlelwane obuqhelekileyo
1.8 IGemini ene-Aquarius, ubudlelwane obuhlekisayo
1.9 IGemini enePisces, ubudlelwane beempixano ezinobushushu
1.10 Ukuhambelana kweGemini kunye neLibra
1.11 IGemini kunye neCapricorn
Iimpawu zezodiac. Ubukrelekrele, ulumkile, ubhetyebhetye, unomdla, ubukhali, ubhetyebhetye, ubuchule, ubuciko, ulutsha kwaye uhlaziyekile, kodwa ukuba iimpawu zakho ezingalunganga ziyavela, uya kuba ngaphezulu, ulize kwaye uphikise, ungabinako ukugxila, uvalo kwaye unomdla. Banxibelelana, nokuba bayazichaza iinjongo okanye hayi, bayathanda ukuqiqa, ukuxoxa, ukucwangcisa, okuhlala kubabiza. Ukusuka kwindawo yokujonga, umoya ungabanda kwaye kube nzima ukuwubonakalisa. Bakuxabisile ukungqinelana kolwazi kunye nenkululeko yothando.
Ubudlelwane neGemini Aries: IGemini luphawu lonxibelelwano olugqwesileyo, iintlantsi kunye nokuqaqamba kwengcinga abanomdla kuzo iiAries. Umlingane waseGemini kunye no-Aries ubona umntu okrelekrele onokuthi axoxe ngezihloko ezahlukeneyo naye, ingozi kukuba xa umntu waseGemini ethetha kakhulu kwaye eqala ukuthetha engayeki, ekushiya ulahlekile, ubudlelwane bezothando buqala ukuba semngciphekweni.
I-Taurus kunye neGemini, ubudlelwane obusekwe kunxibelelwano, iGemini luphawu lokuthetha, ukucinga okukhawulezayo kunye neencoko ezimnandi. Ngeengxoxo ezakhayo, iingxaki ezivelayo zinokusonjululwa.
Ingxaki kukuba xa amaqabane eGemini ethetha kakhulu ukuba angathetha ngalo lonke ixesha. Oku kuyabahlukanisa abantu baseTaurus, kwaye abantu beTaurus ngokubanzi bathanda ukuhlala bethe cwaka, kwaye oku akuthethi ukuba banosizi okanye abathandani.
IGemini eneGemini, ubudlelwane obunobuchule kunye nolwalamano oluhambelanayo
Esi sibini asisoze sikruquke kuba xa bekunye banezihloko ezininzi abanokuthetha ngazo, batsala umdla ofanayo, kwaye ngenxa yobukrelekrele nokuthetha kweGeminis banokuchitha ixesha elininzi bexoxa ngesihloko esinomdla, okanye batshintshe ukusuka kwintloko ukuya kwenye ngaphandle ulahlekelwe ngumsonto wencoko. Kwimfihlo, bayacacisa kwaye bayayazi indlela yokubuza into abayifunayo.
IGemini enomhlaza, ubudlelwane nabantu abahlukeneyo
Ubushushu bakho abuhambelani nohlobo loMhlaza oluqhelekileyo nolunomdla. Kokwakho, yonke into iyasebenza ngokwengqondo, ngokwasengqondweni nakwingqondo, ngelixa iCancer ine-intuition kunye neemvakalelo ezingakumbi. Ewe, kwiimeko ezininzi, iqabane lakho lomhlaza liya kuba lilungelo lokuchaza izimvo, kwaye uyakubona ukuba kwezinye iimeko iya kuba nguwe, kodwa awunakuhlala uzula phakathi kwesizathu, ungquzulwano lweemvakalelo kunye nomlinganiswa.
IGemini kunye noLeo ubudlelwane bokutsala bobabini
La Ukuhambelana kweGemini kunye ne-leoUnomdla kubuntu obudubulayo bukaLeo, le yindlovu yomlilo ehambelana kakuhle nobuntu bakho, emoyeni. Nonke ninomdla ofanayo kwaye ubulumko benu benza uLeo iqabane lakho aneliseke, kwangaxeshanye, ubuntu bezinto zomlilo zivelisa iintlantsi kubudlelwane obusondeleyo, zisenza intlanganiso nganye ibe yinto eyahlukileyo kwaye yomelele.
IGemini neVirgo, ubudlelwane obugcwele ukugxekwa
Nangona omabini la maqela eenkwenkwezi esebenzisa umlinganiselo ofanayo, iMercury, aboniswa ngokwahlukileyo. UVirgo ujonga iinkcukacha kwaye ubona iziphene kuyo yonke into, kwaye awunakukuthwala. Xa iMercury iphinda ibhalwe ngokutsha, imeko iba mbi njengoko isiba nzima ngakumbi, ngaphandle kokuba bayakuvala xa bekugxeka.
IGemini eneScorpio, ubudlelwane bomona kunye nengxabano
Ingxaki apha ivela kubukho beScorpio kunye nomona wakhe okanye umnqweno wokukulawula. Unesimo simahla kwaye awuthandi ukuchaza yonke into oyenzayo, apho ukhoyo, uhlala nabani, nayo yonke into umcuphi weScorpio afuna ukuyazi. Obu budlelwane bunokubuza imibuzo rhoqo, njengoko buhlwayela ukungathembani.
Qhubeka ufunda malunga ukuhambelana komhlaza kunye neminye imiqondiso, ngenisa ikhonkco kwaye ufumanise.
IGemini eneSagittarius, ubudlelwane obuvulekileyo kunye nokuzenzekelayo
Ukuhambelana kweGemini kunye neSagittarius ungumoya, iSagittarius ngumlilo, indibaniselwano ilunge kakhulu kwaye ubushushu bufanelekile kakhulu. Obu budlelwane buhlala buvulekile kakhulu kwaye banokuxolela iimpazamo zabanye ngaxa lithile. NjengeGemini, uyaziqonda iimfuno zomlingane wakho zokuzimela, kwaye unxibelelwano phakathi kwenu nobabini alunzima kakhulu. Kwinxalenye esondeleyo kukho amandla alungileyo phakathi kwezi zimbini, kukho amandla axhasayo.
IGemini neCapricorn, ubudlelwane obuqhelekileyo
Nangona ayisiyiyo indibaniselwano embi ngokwayo, ayisiyona indibaniselwano intle, kuba ubushushu kunye nobuntu abufani kakhulu. Uhlala ubhetyebhetye kakhulu, wonwabile, kwaye ungakhathali malunga nezinto ezithile ongazithathi nzulu. Kwelinye icala, iqabane lakho liqeqeshwe ngakumbi, libaxekile, lixhalabile malunga nento engakubangeli ukuba uxhalabe kwaye asisiqondi isimo sengqondo asichaza njengakhulileyo okanye esingakhathaliyo.
IGemini ene-Aquarius, ubudlelwane obuhlekisayo
Njengawe, i-Aquarius luphawu lwento yomoya. Ngenxa yobudlelwane phakathi kweGemini kunye nokonwaba, i-Aquarius iba yinto enomdla kwaye ngokuchaseneyo, ukuthanda izinto kuhlala kufana, kwaye ngokubanzi ubudlelwane buhlala buhamba ngethoni enobuhlobo nenomdla kuba zombini zihlala zihanjiswa.
IGemini enePisces, ubudlelwane beempixano ezinobushushu
Ubudlelwane kunye nePisces abukho lula kuwe, kuba el mundo kwaye ubomi bunemibono echaseneyo, uyiPisces enomdla, into oyibonayo ngenye indlela, kwaye neqabane lakho libona enye indlela, kuthatha ixesha elide ukuza kummiselo, nokuba izinto zilula njengokuchitha impelaveki kwenye indawo , bathathe inxaxheba kumsitho okanye babambe intlanganiso kunye. Oku kufuna umgudu, akunakwenzeka, kodwa kunzima.
Ukuhambelana kweGemini kunye neLibra
Olu ludibaniso lwabanxibelelanisi abalungileyo. Unomdla ofanayo ekubaliseni amabali, kunye, baqulunqa entsha. Ayinamsebenzi ukuba uyaphila okanye awuphili, umlingo yeyona nto ibalulekileyo. Ukukwazi kwabo ukusombulula iingxaki benza njalo ngokuthetha.
IGemini kunye neCapricorn
ICapricorn iyakrokra, kubonakala ngathi ayinamsebenzi. Nangona kunjalo, ukuhamba kwakho kuyamthakazelisa. Ke wena, uphupha ngokufihlakeleyo ukuba ukwazi ukucacisa le mfihlakalo iyodwa. Ikhonkco linokuchaphazeleka kukungaqondani okanye ukuqeshwa. Kodwa xa ekugqibeleni isiphumo, sihle kakhulu. Bobabini bathanda ukuhlengahlengiswa kunye nokuphuculwa.